Ikanam warara na -enye uru Galore
N'ime afọ ole na ole gara aga, teknụzụ LED etoola na oke ịtụnanya. Ọkụ ọkụ ọkụ nke LED ugbu a na-arụ ọrụ nke ọma ma na-ele anya karịa ka ọ dị na mbụ, ọnụ ahịa ọkụ na-agbada kwa nkeji iri na ise. Ọkụ ọkụ na-enwu ọkụ bụ ụzọ a pụrụ ịdabere na ya, dị ọnụ ahịa iji gbakwunye ọkụ ebe ọ bụla ịchọrọ ya, n'ime ma ọ bụ n'èzí. Malite inyocha uru nke taa.
Ezubere oriọna LED ka ọ nọrọ ogologo oge karịa ogologo ọkụ ọkụ nkịtị. Ha anaghị achọkarị nnọchi. Iji ọkụ na-enwu ọkụ LED na mpaghara siri ike iru-dị ka n'okpuru ma ọ bụ gburugburu steepụ, n'ime kabinet, ma ọ bụ n'akụkụ okporo ụzọ-na-enye ohere maka ọkụ na-agbanwe agbanwe na-enweghị nchegbu nke .
Ọ bụ ezie na ọkụ ọkụ ọkụ dị oke ọnụ karịa ọkụ ọkụ, fluorescent, ma ọ bụ ọkụ halogen, ụgwọ mmalite nke mbụ na-agbada site na ogologo ndụ ọkụ na iji ike dị ala. Ebe ọ bụ na ọkụ warara nke LED na -eji obere ọkụ eletrik, dochie ọkụ gị dị ugbu a nwere ike igosi gị mbelata ozugbo na ụgwọ ọkụ kwa ọnwa. Na mgbakwunye, ugboro ugboro nke ndị nnọchi anya na -eme ka ọnụ ahịa ọnụ ala niile na ọnụ ahịa ọkụ ọkụ LED dị elu. Nlekọta obere oge, mkpa ọkụ eletrik dị ala, na ogologo ọrụ ogologo oge niile na-enye aka ime ka ọkụ ọkụ LED bụrụ otu n'ime ụzọ ọkụ kacha dị ọnụ ala n'ụwa hụtụrụla.
N'ọdịnala taa, nchegbu gburugburu ebe obibi dị ọtụtụ mmadụ mkpa karịa ka ọ dị na mbụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na -echeta mkpofu nke ndị ahịa ha, ojiji eletriki ha, yana mgbakwunye kemịkalụ na ihe ndị ọzọ na -egbu egbu na mkpofu, osimiri na ọdọ mmiri anyị. Ọkụ ọkụ na -acha ọkụ ọkụ bụ ọmarịcha gburugburu ebe obibi. Mkpa ọkụ eletrik dị ala nke ọkụ na -enyere aka belata ọnụ ahịa ike ma belata ojiji ike ụlọ niile. Ogologo ndụ ha na -enye ohere maka nnọchi anya dị ụkọ, na -edebe ọtụtụ ihe na nsị. N'adịghị ka kọmpat fluorescent kọmpat, nke nwere ike ịdị ize ndụ ịtụfu n'ụzọ na -ekwesịghị ekwesị, mgbe ọkụ ọkụ ọkụ nke LED dara, nhicha dị mma yana enweghị njikwa ọpụrụiche.
Enwere ike iji ọkụ ọkụ ọkụ LED n'ime ma ọ bụ n'èzí. A na -enweta ya na ngalaba siri ike ma ọ bụ na -agbanwe agbanwe, emebere ka etinye ya ngwa ngwa n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla. Ọ dị mfe ịwụnye na -achọ ntakịrị ka ọ ghara mmezi ka oge na -aga. Ọ dị n'ụdị, ogologo, ma ọ bụ ụdị ọ bụla ị nwere ike iche maka dabara na mkpa ọkụ gị ọ bụla. Mgbanwe ya, yana ntụkwasị obi ya na -adịte aka yana ọnụ ala ya ka oge na -aga, na -eme ka ọ bụrụ nhọrọ kacha mma maka onye ọ bụla na -akwalite ọkụ ha ma ọ bụ na -anwa ịkwaga n'ụdị ndụ ndụ.
Oge ezipụ: Aug-13-2021
900w Dugara Iju Mmiri Light, Mere Floodlight 30w, Dugara Solar rechargeable Iju Mmiri Light, Philips 3030 Dugara Iju Mmiri Light, Ulo elu Led Panel Light , Dugara Tri-Gosiri Light eletrik ,